0 Sunday July 05, 2020 - 11:39:07
0 Sunday July 05, 2020 - 11:38:07
Dibax baxyo ballaaran balse waqti kooban socday ayaa maanta ka dhacay fagaaraha Daljirka Daahsoon ee degmada Boondheere magaalada Muqdisho.
0 Sunday July 05, 2020 - 08:35:57
Maanta oo ay taariikhdu ku beegantahay 5 July 2020 ayaa lafilayay in magaalada Muqdisho uu ka furmo shir dhaxmari lahaa hoggaamiyaasha maamul goboleedyada iyo Farmaajo.
0 Sunday July 05, 2020 - 08:22:30
Dr. Suldaan Maxamad Garyare oo kamid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee u dhuun daloola dhacdooyinka Afrika siiba geeska iyo bariga ayaa qiimeyn ku sameeyay marxaladda ay maanta ku sugan tahay dowladda Itoobiya.
0 Sunday July 05, 2020 - 08:19:54
Wararka ka imaanaya wadanka Gaana ee dhaca galbeedka qaaradda Afrika ayaa sheegaya in xaalad karaantiil ah lageliyay madaxweynaha wadankaas kadib markii looga shakiyay caabuqa Covid19.
0 Saturday July 04, 2020 - 14:31:17
War rasmi ah oo kasoo baxay Xarakada Shabaabul Mujaahidiin ayay ku sheegatay mas'uuliyadda qaraxyo ka dhacay Muqdisho iyo Baydhabo.
0 Saturday July 04, 2020 - 12:17:59
Wararka ka imaanaya dhulka Soomaalida NFD ee gummeysiga Kenya ku jira ayaa sheegaya in weerar xooggan markale lagu qaaday saldhig ay ku sugnaayeen ciidamada Kenya.
0 Saturday July 04, 2020 - 09:16:47
0 Saturday July 04, 2020 - 09:15:47
Melleteriga Maali ayaa markale lakulmay weerar khasaara badan lagu gaarsiiyay kaasi oo ay geysteen xoogag jihaadi ah.
0 Saturday July 04, 2020 - 08:40:24
Ciidamo katirsan shisheeyaha AMISOM gaar ahaan kuwa Uganda ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday qarax culus oo lagula beegsaday deegaan dhaca waqooyiga Muqdisho.
0 Saturday July 04, 2020 - 08:26:48
Jugta qarax xooggan ayaa goordhow ka dhacay gudaha magaalada Muqdisho gaar ahaan goob ammaankeeda si aad ah loo ilaaliyo.
0 Thursday July 02, 2020 - 17:52:07
Rabshado dhiig badan ku daatay ayaa markale kasoo cusboonaaday magaalooyinka waaweyn ee wadanka Itoobiya.
0 Thursday July 02, 2020 - 17:36:28
Dhaqaatiirta caafimaadka dalka Mareykanka ayaa soo saaray digniino culus oo ku saabsan in boqolaal kun qof American ah ay udhiman doonaan caabuqa dilaaga ah e Covid19 haddii aan wax laga qaban xaaladda caafimaad ee wadanka ka jirta.
0 Thursday July 02, 2020 - 14:01:25
Wararka ka imaanaya dalka Myanmar ee dhaca qaaradda Aasiya ayaa sheegaya in boqolaal qof ay dhinteen kuwa kalane lala'yay kadib markii uu dhul burbur ka dhacay waqooyiga wadankaas.
0 Thursday July 02, 2020 - 13:42:18
Khalalaasaha ka socda wadanka Itoobiya ayaa sii xoogeysanaya saacadba saacadda ka dambaysa.
0 Thursday July 02, 2020 - 11:03:45
Khasaara xooggan ayaa ciidamada Melleteriga Kenya kasoo gaaray weeraro safmareen ahaa oo saacadihii lasoo dhaafay lagula beegsaday deegaanno katirsna gobolka Jubbada Hoose.
0 Thursday July 02, 2020 - 10:42:45
Dowladda Shuuciyadda Shiinaha ayaa maamulka isku magacaabay Somaliland uga digan in uu xiriir lasameysto dalka Taiwan oo daris la ah Shiinaha islamarkaana aan wax aqoonsi ah haysan.
0 Thursday July 02, 2020 - 07:45:08
Wararka ka imaanaya wadanka Itoobiya ayaa sheegaya in kacdoonka rabshadaha wata uu kusii xoogeystay inta badan gobollada ku dhow magaalada caasimadda ah ee Addis Ababa.
0 Wednesday July 01, 2020 - 19:33:40
Dowladda Aala Sacuud ayaa ku dhawaaqday qiima koror ay ku samaysay dhammaan cuntadad daruuriga ah ee laga isticmaalo dhulka xarameynka ee jaziiradda carabta.
0 Wednesday July 01, 2020 - 19:26:31
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya iska hor'imaadyo culus oo maanta magaalada Dhuusamareeb ku dhaxmaray ciidamo kawada tirsan dowladda Federaalka.
0 Wednesday July 01, 2020 - 16:11:33
Ugu yaraan 50 qof Itoobiyaan ah ayaa dhintay tira kalane dhaawacyo ayaa soo gaaray kadib markii dibad baxyo rabshado wata ay gilgileen magaalooyinka waaweyn ee dalka Itoobiya.
0 Wednesday July 01, 2020 - 11:37:24
0 Wednesday July 01, 2020 - 11:36:24
Dagaalyahanno aad u hubaysan oo katirsan Al Shabaab ayaa saacadihii lasoo dhaafay weeraro safballaaran ah ku mirayay saldhigyo ciidamada shisheeye ay ku leeyihiin Koonfurta iyo bartamaha dalka Soomaaliya.
0 Wednesday July 01, 2020 - 11:20:34
Ilo wareedyo dhanka amniga ah oo laga helay gobolka Baay ayaa sheegaya in xoogag hubaysan ay gobolkaas ku dileen sarkaal sare oo katirsanaa hay'adda dambi baarista CID-da dowladda.
0 Wednesday July 01, 2020 - 11:15:13
Hoggaamiyaha maamulka isku magacaabay Puntland ayaa ku dhawaaqay in uu qaadacay codsigii uga yimid Farmaajo ee ahaa in uu kasoo qeyb galo shir dhowaan ka furmi lahaa magaalada Muqdisho.
0 Wednesday July 01, 2020 - 10:17:49
0 Tuesday June 30, 2020 - 17:23:24
Jugta qarax xooggan ayaa maanta gelinkii laga maqlay degmada Wardhiigleey ee magaalada Muqdisho.
0 Tuesday June 30, 2020 - 17:11:56
Wararka ka imaanaya gobolka Hiiraan ee dhaca bartamaha dalka Soomaaliya ayaa sheegaya in weerar xooggan markale uu lakulmay saldhig ay ciidamada dowladda Federaalka ku lahaayeen duleedka Beled Weyne.
0 Tuesday June 30, 2020 - 16:09:37
Kacdoonno rabshada wata ayaa ka bilaawday magaalada addis ababa ee caasimadda u ah dalka Itoobiya, kunanaan kun oo ruux ayaa isugusoo baxay waddooyinka waaweyn waxayna dhigayaan iskuso baxyo ballaaran.
0 Tuesday June 30, 2020 - 08:00:59
0 Monday June 29, 2020 - 20:23:22
Xiisado siyaasadeed oo aad u xooggan ayaa ka dhashay go'aan uu shalay soo saaray baarlamaanka dowladda Federaalka Soomaaliya.
0 Monday June 29, 2020 - 20:07:32
Dacwad soo oogaha guud ee dowladda Shiicada Iiraan ayaa soo saaray amar lagusoo xirayo Donald Trump madaxweynaha Mareykanka
0 Monday June 29, 2020 - 12:39:32
Shabakad lagu magacaabo "The War Horse" oo ka faaloota arrimaha military-ga ayaa soo daabacday warbixin qoto dheer oo ay kaga hadleyso duullaanka Mareykanka ee Soomaaliya iyo sida shacabka Soomaaliyeed ee muslimka ah ay u gurteen miraha qaraar ee duullaankaasi iyadoo tilmaantay in dalkan ku…
0 Monday June 29, 2020 - 12:37:32
« Prev1234567 ... 354Next »